Blog Reader: [Padauk Myay]3New Entries: မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်နှင့်အလားအလာ(၆)
[Padauk Myay]3New Entries: မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်နှင့်အလားအလာ(၆)
အတိုက်အခံများရဲ့ အဓိက အောင်မြင်မှုကတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းပါဘဲ။ အတိုက်အခံများဟာ နိုင်ငံခြားသား တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများနဲ့ပေါင်းပြီး အနောက်နိုင်ငံများက နအဖ အပေါ် ဖိအားပေးမှု၊ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်လာအောင်၊ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ INGO များကနေ အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနဲ့ အခြား လုပ်ဆောင်ချက်များ အပေါ် မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ပြီး ကြေညာချက်တွေ၊ အစီရင်ခံစာတွေ ထုတ်ပြန်နေအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ နအဖ အစိုးရရဲ့ တရားဝင်မှုကို အကန့် အသတ် ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ နအဖကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ထိခိုက် စေနိုင်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတကာ သံတမန်ရေးရာမှာ နအဖ အတွက် အကန့်အသတ်တွေ အများကြီး ပေါ်စေခဲ့တယ်။
ဒီလိုလုပ်နိုင်တာဟာ စစ်အေးခေတ်လွန် ကမ္ဘာရဲ့ အင်အားချိန်ခွင်လျှာ ပြောင်းလဲမှု၊ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး အခြေအနေ၊ သတင်း နည်းပညာ ထွန်းကားလာမှုနဲ့ INGO တွေရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခန်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ တွန်းအားပေးမှုက အဓိက အခန်းက ပါပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း လမ်းစဉ် ပါတီခေတ်တုံးက အစိုးရဟာ ပြည်တွင်း ရေးရာ မူဝါဒတွေကို နိုင်ငံတကာ အာရုံစိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ လွတ်လွတ် လပ်လပ် လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် နအဖကတော့ အမြဲတမ်း စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ ဘ၀နဲ့ လှုပ်ရှားရတဲ့ အခြေအနေ၊ တနည်းအားဖြင့် နောက်ကြောမလုံ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများ အနေနဲ့ ပြည်ပက ဖိအားပေးမှုတွေရယ်၊ ပြည်တွင်းက လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေရယ် ပေါင်းလိုက်ရင် နအဖက ပြိုကွဲ ပျက်စီးသွား လိမ့်မယ်လို့ ယူဆထားကြတယ်။ ၉၀ ဆယ်စုတွေ အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရှေ့ဥရောပက ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးတွေ၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက ဒီအယူအဆကို ခိုင်မာအောင် တွန်းအားပေးခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အတိုက်အခံများဟာ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ ရရှိထားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အလွန်အကျွံ အားထားခဲ့တယ်။ ဒါတွေနဲ့ နအဖ ပြိုကွဲသွားအောင် လုပ်နိုင်မယ်။ အလျှော့ပေးအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် အတိုက်အခံများက မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ထဲက အကျပ် အတည်းပေါင်းများစွာကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးပြီ ဆိုတဲ့အချက်ကို မေ့နေကြတယ်။ ရန်ကုန်အစိုးရ ဘ၀ရောက်နေတဲ့ အချိန်ကာလ၊ သန့်ရှင်း တည်မြဲ အကွဲအပြဲ၊ တရုတ်ဖြူ အကျပ်အတည်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဖက်ဒရယ်မူ အကျပ်အတည်းတွေမှာ စစ်တပ်ရဲ့ ညီညွတ်မှုကို ရအောင် ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်အာဏာ သိမ်းပြီး နောက်မှာလဲ ကျွန်းဆွယ်အရေးအခင်း၊ အလုပ်သမားအရေးအခင်း၊ ဦးသန့် အရေးအခင်း၊ မှိုင်းရာပြည့်၊ ၈၈ အရေးအခင်း၊ ၉၆ လှုပ်ရှားမှု၊ ၂၀၀၇ အရေးအခင်း စတဲ့ အကျပ် အတည်းတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒီအကျပ် အတည်းတွေကို ကျော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ မှန်တယ်၊ မမှန်ဘူး ဆိုတာကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် မြန်မာ့ တပ်မတော်ဟာ တစ်ချိန်လုံး Crisisေ တွကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်၊ Survival လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ထောက်ပြချင်တာပါ။ အဲဒီလို ရပ်တည် ဖြတ်သန်း နိုင်တာဟာ သူတို့အဆို တပ်တွင်း စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ဆိုတာကို ထိန်းထား နိုင်တာကြောင့် လို့မြင်ပါတယ်။
သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် မြန်မာ့ တပ်မတော်ရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ထိခိုက် နိုင်လောက်တဲ့ အကွဲအပြဲ ဟာ ၄၈ ခုနှစ်မှာ လက်ဝဲ ညီညွတ်ရေး ပျက်ပြီး ဗမာ့တပ်မတော် တပ်ရင်း၁နဲ့ ၃ က အစိတ်အပိုင်း အတော်များများ တောခိုသွားတဲ့ အချိန်တစ်ခုပဲ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်ဟာ တပ်ထဲမှာ အဲဒီလို အကွဲအပြဲတွေ မဖြစ်အောင် အရမ်း အလေးထားခဲ့တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အတိုက်အခံများနဲ့ နိုင်ငံခြား အကဲခတ်အများစုဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ အာဖရိက၊ တောင်အမေရိ ကတိုက်က တပ်မတော်တွေလို အုပ်စု Faction တွေရှိတယ်လို့ မြင်ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တင်းမာသူ၊ ပျော့ပြောင်းသူလို့ ခွဲကြ၊ ဘယ်သူ့အုပ်စု၊ ဘယ်ဝါအုပ်စု လို့နံမည်တတ်ကြ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဦးခင်ညွန့်တို့ကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာလဲ ကိုယ့်ကို တစ်သက်လုံး စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ နှိပ်စက်ခဲ့ တဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အုပ်စုကိုတောင် နေ့ချင်းညချင်း သဘောထား ပျော့ပြောင်းတဲ့ အုပ်စုထဲ ထည့်ပြီး သူတော်ကောင်း သတ်မှတ် တော့တာပါပဲ။ အဲဒီလို လိုရာဆွဲ ကောက်ချက် ချတာတွေဟာ အတိုက်အခံများရဲ့ အားနည်းချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ ရှုတ်ထွေး နက်နက်တဲ့ အခြေအနေတွေကို နားလည်အောင် လုပ်ပြီး အဖြေရှာရမယ့်အစား လိုရာဆွဲပြီး ခပ်လွယ်လွယ် ကောက်ချက်ချ တော့တာပဲ။ ဒီလိုလုပ်တာကလဲ ပိုပြီး Lobby လုပ်လို့ ကောင်းတာကိုး။ တကယ်တော့ ထောက်လှမ်းရေး အုပ်စုတွေ၊ တစ်ချို့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အဖယ်ရှားခံရတာဟာ Unity of Command ကို ထိခိုက်လို့ အရေးယူခံရ တာသာ ဖြစ်တယ်။ တပ်မတော်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ရမယ်။ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေးဟာ သူတို့ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံအတိုင်း အဆင့်ဆင့် သွားရမယ် ဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်ကနေ ဘယ်တုံးကမှ သွေဖည်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သတိပြုဖို့လိုပါလိမ့််မယ်။
အဲဒီလို တပ်မတော်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါရမယ် ဆိုတာကလဲ သမိုင်း အတွေ့အကြုံအပေါ် မူတည်ပြီး စစ်ခေါင်းဆောင် အဆင့်ဆင့်က တစ်သတ်မတ်တည်း ကိုင်ဆွဲခဲ့တဲ့ ယုံကြည်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ၄၇- ၄၈ ကစပြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး လောက အကွဲအပြဲတွေကြားမှာ စစ်တပ်တစ်ခုပဲ လွတ်ကင်းပြီး ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။ ၄၈-၄၉ ရန်ကုန် အစိုးရ အဖြစ် ရောက်တဲ့အချိ်န်မှာ ဖဆပလ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အနေနဲ့ အိန္ဒိယကို ထွက်သွားဖို့ အထိ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အချိန်မှာ စစ်တပ်က သူတို့ရအောင် ခံတိုက်ပါ့မယ်။ မသွားပါနဲ့လို့ တားပြီး အခြေအနေကို ရအောင် ထိန်းခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ၈၈ လို အစိုးရယန္တရား၊ ပါတီ ယန္တရားတွေ အားလုံး ရပ်တန့်သွား နေတဲ့အချိန်မှာ တပ်မတော် တစ်ခုပဲ Function လုပ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် ကျန်ခဲ့ပြီး အစိုးရယန္တရားကို ပြန်လည် ထူမတ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြည့်ရင် စစ်သားတွေမှာ ဒီလိုယုံကြည်ဖို့ အတွက် ခိုင်လုံတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ ရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံ ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ယုံကြည်တာတွေ အစွန်းရောက်ပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေကို အထင်အမြင် သေးတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတာ ကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့။ သို့သော် ဒီအကြောင်းတရားကို ယထာ ဘူတကျကျ မလေ့လာဘဲနဲ့ စစ်တပ်က အာဏာလိုချင်လို့ နိုင်ငံရေး ထဲမှာ ဆက်ပါနေတာ ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းနဲ့ ပြဿနာတွေကို ချဉ်းကပ်မယ်ဆိုရင် အဖြေနဲ့ နီးစပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ISPD ရဲ့ စာတမ်းမှာ အတိုက်အခံတွေဟာ စစ်တပ်ရဲ့ Mindset ကို နားလည်အောင် မကြိုးစားဘူးလို့ ထောက်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို နားလည်အောင် မကြိုးစားဘဲ မိမိ အထင်နဲ့ ကောက်ချက်ချလို့ အလွဲကြီးလွဲခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။
၇. ၁. ၂၀၀၉ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုး ၂၀၀ပါ သင်္ဘောတစင်း အင်ဒိုနီးရှား အာချေးကမ်းတွင် တွေ့ရှိ - ဗွီအိုအေ click here
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ထပ်ဆင့် ထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံနေရ - ဗွီအိုအေ click here
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါဆိုင်ရာ ပညာပေးအခြေအနေ - ဗွီအိုအေ click here
ရခိုင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာစောမြအောင် ကွယ်လွန် - ဗွီအိုအေ click here
ဗကသခေါင်းဆောင် ဆေးရုံတက် - မဇ္ဈိမ click here
အစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းမည့် အစီအစဉ်အပေါ် သူတို့အမြင် - မဇ္ဈိမ click here
သတင်းသမားဘ၀ - မဇ္ဈိမ click here
ပြင်ပလောင်စာဆီဈေးနှုန်း ကျသော်လည်း အစိုးရထုတ်ဈေး မပြောင်းလဲ - မဇ္ဈိမ click here
ထိုင်းရှိ မြန်မာလုပ်သားများ လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်း တနှစ် ထပ်တိုးပေးမည် - မဇ္ဈိမ click here
Hip Hop အဆိုတော် ရန်ရန်ချမ်း ပြန်လွတ်လာ - မဇ္ဈိမ click here
နာဂစ်အရေး ကူညီသူ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် - မဇ္ဈိမ click here
၂၀၀၈ ခု ၀န်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ အဂတိလိုက်စားမှု (၅၀၀) နီးပါးရှိ - ခေတ်ပြိုင် click here
ကွယ်လွန်သူ ဦးစောမရအောင်နေရာ အစားထိုးမည် ပါတီလှုပ်ရှားမှုရပ်မသွားဟု ဦးအေးသာအောင်ပြော - ခေတ်ပြိုင် click here
ရန်ကုန်မှာ အက်ဖ်အီးစီဈေးကျ - ခေတ်ပြိုင် click here
ပြည်တွင်းရေကြောင်း သင်္ဘောများ ပြင်ပဒီဇယ်ဆီဖြင့် ဆွဲမည် - ခေတ်ပြိုင် click here
ကလေးစစ်သားဘ၀ (၁၀) နှစ်ကြာနေခဲ့ရသူ အိုင်အယ်လ်အိုကြောင့် ပြန်လွတ် - ခေတ်ပြိုင် click here
ဝတ်မှုန်ရွှေရည်သတင်း Weekly Eleven သာ ဖော်ပြခွင့်ရ - ခေတ်ပြိုင် click here
စက်မှု (၁) ၀န်ထမ်းများနှင့် လိမ် (၄) လိမ် ဆောင်ပုဒ် - ခေတ်ပြိုင် click here
မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကို ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကဲ့သို့ အစီးမခံရအောင် နအဖ ၀န်ကြီးချူပ် ညွှန်ကြား - ခေတ်ပြိုင် click here
မီတာမသုံးသည့် စီးတီးတက္ကစီများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သိမ်းမည် - ခေတ်ပြိုင် click here
၀န်ထမ်းလစာ တိုးပေးမည်ဟု နေပြည်တော်မှာ သတင်းပျံ့ - ခေတ်ပြိုင် click here
လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆရာဒဂုန်တာရာနှင့် ခေတ်ပြိုင်သတင်းထောက်မင်းနိုင်သူ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် - ခေတ်ပြိုင် click here
ရှမ်းပြည်မှ ထီလိမ်ဂိုဏ်း - ခေတ်ပြိုင် click here
တာချီလိပ်-မယ်ဆိုင် နကသများဒုက္ခပေး - ခေတ်ပြိုင် click here
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နှင့် အစားအသောက်ကဏ္ဍ - ၀ိကလီးအလယ်းဗင်း click here
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၀ိကလီးအလယ်းဗင်း click here
၂၀၀၈ ခုနှစ် အရေးပါဆုံး ရွေးကောက်ပွဲများ - ၀ိကလီးအလယ်းဗင်း click here
၆ . ၁. ၂၀၀၉ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
၂၀၀၈ ပထမကိုးလအတွင်း မြန်မာ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှစ်ဆနီးပါးတိုး - ဗွီအိုအေ click here
စစ်တွေကျောင်းသား ၅၀၀ ခန့် သွားလာရေးခက်ခဲလို့ လမ်းလျှောက်ကန့်ကွက် - ဗွီအိုအေ click here
နှစ်ကူးအကြို ထိုင်းညကလပ်မီးလောင်မှု သေဆုံးမှုအထဲ မြန်မာတဦးပါ - ဗွီအိုအေ click here
နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ဒေသတွေ ၈ လ အကြာ ပြန်လည် နာလန်မထူနိုင်သေး - ဗွီအိုအေ click here
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အမေရိကန်သံရုံးသစ် အီရတ်မှာဖွင့်လှစ် - ဗွီအိုအေ click here
ဦးသန့် အဆိုအမိန့် မျက်နှာဖုံးတွင် ပါရှိသည့် မြန်မာသစ် မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေခွင့် မကျသေး - မဇ္ဈိမ click here
ကျူရှင်ဆရာ တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြ - မဇ္ဈိမ click here
လိုင်စင်သက်တမ်း မတိုးသည့် စာနယ်ဇင်းများ ရပ်ဆိုင်း - မဇ္ဈိမ click here
မီဇိုရမ်မှာ မြန်မာစားသောက်ဆိုင် မီးလောင် - မဇ္ဈိမ click here
UWSA က အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေကို အမည်ပြောင်း - မဇ္ဈိမ click here
တပ်ရိက္ခာ စပါး လယ်သမား မကိုက် - မဇ္ဈိမ click here
စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ရေး အရှုပ်တော်ပုံ အန်စီယူဘီ အကွဲအပြဲသရုပ်ပေါ်လွင် - ခေတ်ပြိုင် click here
မြန်မာအလုပ်သမားများထံမှ ထိုင်း-မြန်မာအာဏာပိုင်များလာဘ်ယူနေ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ဆန္ဒပြမှုဖြစ်အောင် NLD သွေးထိုးကြောင်း စစ်အစိုးရစွပ်စွဲ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ရာသီပေါ်ပန်းများ ၀ယ်လိုအားမြင့်တက်နေသော်လည်း ပန်းခြံများမှာရောင်းလိုအားနည်းပါး - ၀ိကလီးအလယ်ဗင်း click here
ရခိုင်ပြည်နယ်၊မြောက်ဦးမြို့နယ်မှတောင်သူ များမတ်ပဲကို အဓိကတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာ - ၀ိကလီးအလယ်ဗင်း click here
မာဖီးယားဂိုဏ်းဝင်များ အဖမ်းခံရ - မြန်မာတိုင်း click here
အိပ်ချိန်နည်းလျင် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနိုင် - မြန်မာတိုင်း click here
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://padaukmyay.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.